Ukuba imifino kusho ukubhekana ezihlukahlukene nezilingo nezinselele. Lapho nxazonke ukudla hamburger, futhi une lutho akhethiwe, amandla akho usungaqala buthaka. Noma kunjalo, ukudla okunjalo kungakusiza uzizwe ungcono. Uma - i imifino sifisa, lezi amathiphu uzokwenza wena a support okuhle.
Yidla yamantongomane isidlo
Nuts - kukho olukhulu isidlo, bona ukuqinisekisa umuzwa satiety. Inhlanganisela amaprotheni namafutha kuzo kusiza ukuqeda izifiso ukudla okungenamsoco futhi ngokuphelele igcwalisa. Zonke inyama imfundamakhwela kufanele adle nabo kaningi.
Zama izitsha ezintsha
Qiniseka ukuzama ukuthola izitsha ezintsha bona, imikhiqizo emisha. Hlangana imifino, okuyinto angakaze wazama ngaphambi, ukufunda indlela ukupheka kubo. Funda ukwenza izitsha ezivela cuisine Indian futhi Thai - futhi awusoze miss namanje ukudla.
Zama ukupheka phezu hlupha
Zama ukwenza imifino on the hlupha - kungcono ngendlela emangalisayo okumnandi. Uthola wephunga ocebile futhi zonke izinzuzo imifino, umane Fry kwabo phezu hlupha.
Zama ukudla ukudla ezimibalabala
Izithelo ezimibalabala nezitshalo ekudleni kwakho, kuzoba ngcono kakhulu ngawe. Imifino namahlamvu amnyama kubaluleke kakhulu, kuba ecebile Antioxidants, kodwa hhayi kuphela isaladi - udle iklabishi purple, utamatisi, bell pepper anemibala ehlukene.
Uma udinga ukugqugquzeleka, vakashela ezinezihloko imifino zokupheka izifundo. ukudla okuphekwe ezifundweni is kahle zikhunjulwe, ngoba wamenza umbuthano abanye abantu ukuze okufanayo ukuze uthole umuzwa xaxa futhi alungele ukuzivocavoca emcabangweni wakhe siqu.
Kahle ukwenza juice
Uma nithanda ukwenza zemifino ayo, qiniseka ukusebenzisa juicer izinga esilondoloza izakhamzimba. Uma kungenjalo, nje kudla imali okusezingeni eliphezulu ushukela, futhi akuyikuba noma yiluphi uhlobo lokusetshenziswa.
Ungadli ukudla okusheshayo
Abantu abaningi baqala ngokudla ukudla okungenampilo, Zishiya Ukudla evamile, njengoba amazambane athosiwe namaswidi simnandi kakhulu. Zama ukugcina imenyu yakho isekelwe imifino kanye umthombo enempilo amavithamini amaprotheni. Kulokhu, uyoba nenala energy, kanye nezempilo luqine ngokwengeziwe.
Ungadli usawoti omningi
Soy inyama esikhundleni kungase kubonakale ukhetho best. Abanye baqala ukudla kuphela bese uyakhohlwa imifino. Noma kunjalo soy kuthinta ezingeni estrogen, ngakho-ke kungaba ukunqwabelana esiyingozi kwimenyu. Kungcono ukwenza cutlets yemifino ne amakhowe nodali.
Uma uzizwa ulingeka ukuba badle inyama, vakashela umpheme - abaxhumana nabo kuzokuvumela ukuzwa umthwalo wakho siqu futhi ukuvusa ukwazi.
Ungeqi ku veganism
Yiya ukudla entsha kancane kancane, ungadikibali ngokushesha nemikhiqizo yalo, namaqanda. amaprotheni search kungaba umsebenzi onzima ukuze mikhiqizo siyoba yisisekelo ekudleni ekuqaleni.
Nciphisa ukudla ushukela
Zama ukufunda ngokucophelela amalebula. Ushukela zingase usoso, isaladi sigqoka, hummus - kunoma imuphi umkhiqizo. Kusukela ukudla ushukela ufuna amaswidi, ngakho-ke kufanele kugwenywe.